Ọzara kachasị mma na Africa: site na Sahara ruo Teneré | Akụkọ njem
Ọzara kachasị mma n'Africa
Louis Martinez | | Afrika, Nduzi
Njem ọzara kachasị mma n'Africa Ọ ga -ewere gị dị ka nnukwu njem, kamakwa ịhụ onwe gị na oke ọmarịcha ala. Ọ bụghị ihe ijuanya na ụfọdụ n'ime ebe ndị a bụ, n'agbanyeghị ịdị mfe ha, n'etiti ndị mara mma na mbara ala.
Dị ka a ga -asị na ihe a niile ezughị, ọzara nwere ụdị anwansi maka mmụọ. Ịdị mfe ya na ịdị ukwuu ya na -enyere gị aka ịghọta adịghị mkpa nke ngwongwo ihe onwunwe, ha na -enyere gị aka iwepụ nchegbu ụwa wee jikọta ya na okike. Mana, n'agaghị n'ihu, anyị ga -egosi gị ụfọdụ ọzara mara mma n'Africa.
1 Ọzara kachasị mma na Africa: kedu ihe ị ga -ahụ n'ime ha?
1.1 Ọzara Sahara
1.2 Ọzara Kalahari
1.3 Ọzara Namib ochie
1.4 Danakil, ọzara ọzọ mara mma n'Africa
1.5 Ọzara Tenerife, mgbatị nke Sahara
Ọzara kachasị mma na Africa: kedu ihe ị ga -ahụ n'ime ha?
Na kọntinent ọ bụla n'ụwa enwere ọzara dị egwu. O zuru ezu na anyị kwuru, dịka ọmụmaatụ, nke Atacama na South America (ebe a ka anyị hapụrụ gị akụkọ gbasara ọzara a), nke Gobi na Eshia ma ọ bụ nke Vernlọ obibi (Spain) na Europe. Ọbụlagodi, n'ikwu okwu, ebe dịka Greenland ha bụ ọzara nke aja na -adịghị na ya, mana snow na akpụrụ mmiri.
Mana n'ime ebe niile n'ụwa, ikekwe ọnụọgụ ọzara kacha dị n'ime ya Afrika. Tụkwasị na nke ahụ, mgbatị nke ha dị ukwuu nke na ha na -eburu akụkụ dị mma nke elu kọntinent a. Na nkenke, iji gosi gị, ihe kacha mma bụ na anyị agwalarị gị gbasara ọzara mara mma n'Africa.
N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde kilomita itoolu na ọkara, ọzara a anyị nwere nso bụ nke kachasị ukwuu n'ụwa n'etiti ndị na -ekpo ọkụ (nke atọ mgbe Arctic na Antarctica). N'ezie, ọ gbatịrị site na Oke Osimiri Uhie ruo mgbe Oke Osimiri Atlantik, na -ebi ọtụtụ n'ime North Africa. Kpọmkwem n'ebe ndịda ọ ruru mpaghara Sahel, nke na -eje ozi dị ka mgbanwe na savannah Sudan.
Dị ka ị nwere ike iche n'echiche, na nnukwu mpaghara ala ị nwere ọtụtụ ihe ị ga -ahụ. Maka nke a, anyị ga -agwa gị naanị ebe ụfọdụ dị egwu nke so na ndị kacha mma na Sahara. N'otu aka ahụ, anyị ga -eme ya naanị maka ndị nọ na mpaghara Moroccan. Ndị nọ na ndịda Algeria ma ọ bụ Libya nwere ike ịdị ize ndụ n'ihi ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mpaghara ahụ.
Anyị ga-ebido Merzouga, obere obodo dị na ndịda ọwụwa anyanwụ Morocco ebe ị nwere ike ịhụ ọdịda anyanwụ na -agaghị echefu echefu. Mana anyị ga -ekwu maka ya, karịa ihe niile, n'ihi na ị ga -ahụ ya nke ukwuu Ebe Chebbi, otu n'ime ọmarịcha dunes na Sahara niile. Ụfọdụ n'ime ha ruru mita 200 n'ịdị elu na, site na ụda oroma ha, na -enye gị ọhụụ pụrụ iche.
Ị kwesịghị ileghara ya anya ndagwurugwu draa, ebe ị ga -ahụ ọzara dịka i siri chee ya. Nke ahụ bụ ịsị, nnukwu aja aja na, site n'oge ruo n'oge, oasis nwere osisi nkwụ.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na -amasị akụkụ ndị mmadụ kacha biri na ya na mpaghara Afrịka, ị nwere nleta na -agaghị ekwe omume na Ouarzazate, nke a maara dị ka "ọnụ ụzọ ọzara" yana kwa "Hollywood nke Sahara." Aha ikpeazụ a bụ n'ihi na agbagburu ọtụtụ ihe nkiri ebe a.
Na Ouarzazate ị ga -ahụ ọmarịcha ya kasbah nke Taourirt dere, ebe e wusiri ike nke adobe wuru na narị afọ nke XNUMX iji chebe ụzọ ọlaedo ochie ahụ. Mana ị ga -eletakwa ahịa etiti ya, nke jupụtara na mpaghara; akụkụ Almouahidine na nka souk.
N'ikpeazụ, ihe dị ka kilomita iri na ise site na obodo gara aga, ị nwere ọzọ ala nke nwere aha Ebe Ihe Nketa Ụwa. Ọ bụ ya Ait ben haddou, nnukwu ebe e wusiri ike Berber nke nwere nnukwu nchekwa.
Ogige Transfrontier Kgalagadi
Namibia ọ bụ otu n'ime mba Afrịka kacha nwee oke ọzara. Kpọtụrụ, ndị Kalahari nwere akụkụ nke elu ya, mana nwekwara akwa sara mbara Botswana y South Africa (lee, anyị na -ahapụrụ gị akụkọ gbasara mba ikpeazụ), ebe ọ nwere mpaghara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu nde square kilomita.
Oge mbụ onye mbịarambịa gafere ya bụ n'afọ 1849. Aha ya ga -ama gị nke ọma, dịka ọ gbasara David dị ndụ, onye chọpụtara Victoria Falls. Na, dị ka ọchịchọ ịmata, anyị ga -agwa gị na «kgalagadi» pụtara «oke akpịrị ịkpọ nkụ».
N'ime ọzara a dị egwu ị nwere ike ịhụ Ogige Ntụrụndụ Chobe, nke e nwere ọtụtụ enyí, n'agbanyeghị na o nwekwara ọtụtụ atụ, hippos, giraffes na impalas. Agbanyeghị, iji hụ ọdụm, ị ga -aga na Ebe nchekwa egwuregwu Central Kalahari.
Ọ pụtakwara ìhè n'ọzara a Ogige Transfrontier Kgalagadi, mana, karịa, ihe niile Okpokoro Nnu Makgadikgadi, nke so na ndị kacha ibu n'ụwa. E guzobere ha mgbe nnukwu ọdọ mmiri nke otu aha kpọrọ nkụ, nke ọtụtụ puku afọ gara aga nwere mpaghara buru ibu karịa Switzerland. Ha adịghị mma nke na nke a so na nchekwa ha. Mmadụ etinyeghị aka n'ime ha.
Ọzara Namib ochie
Dune n'ọzara Namib
N'ime ọzara mara mma n'Africa, Namib pụtakwara maka afọ ya, ebe a na -atụle ya onye kacha ochie n'ụwa. N'ezie, ekwenyere na ọ dịrịlarị nde afọ iri isii na ise gara aga. Nke a bụkwa otu n'ime ihe kpatara eji kpọpụta ya Ebe Ndebe Ihe Nketa Ụwa.
Dị ka ị nwere ike chepụtara n'aha ya, a na -ahụkwa ya na Namibia ma o nwere mpaghara ihe dịka puku kilomita iri asatọ. Ọ bụrụ na ị gaa na ya, ájá ya na -acha ọbara ọbara ga -adọrọ mmasị gị, kamakwa ụfọdụ isi ihe ndị kacha atọ ụtọ.
Iji malite, n'otu njedebe bụ Cape Kroos, ebe mbụ ndị Europe rutere na 1486. ​​Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ ebe obibi nke nnukwu anụ ọhịa bea niile dị n'Afrịka.
Na nso nke gara aga, ị nwekwara ndị ama ama Ọkpụkpụ Skeleton, nke bụ otu n'ime mpaghara ndị na -adịghị enweta site na ala na mba ahụ. Ọ sitere na ọnụ ọgụgụ ụgbọ mmiri tọrọ atọ na ọkpụkpụ whale dị na mpaghara ahụ.
Mana ikekwe nke kacha adọrọ mmasị bụ Ogige Namib Naukluft, ebe ị nwere ike ịhụ dunes ruo mita narị atọ n'ịdị elu. N'ikpeazụ, dị ka ihe na -achọ ịmata, n'otu njedebe nke ọzara Namib bụ obodo mmụọ Kolmanskop, obodo ndị na -egwupụta akụ nke ndị Germany wuru na mbido narị afọ nke XNUMX iji chebe ndị na -achọ diamond.
Danakil, ọzara ọzọ mara mma n'Africa
Ugwu ọkụ Erta Ale, n'ọzara Danakil
Emi odude ke usụk usụk Eritrea na n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke Etiopia, na zuru Mpi nke africa, A na -ewere ọzara a ka ọ bụrụ otu n'ime ebe kachasị dị ala na nke na -ekpo ọkụ na mbara ala, nwere oke okpomọkụ karịa iri ise Celsius.
O nwere mpaghara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị kilomita abụọ na iri abụọ na puku abụọ wee pụta ìhè maka ugwu mgbawa ya, nnukwu ụlọ nnu na ọdọ mmiri nke ọdọ mmiri kpụpụtara. N'etiti ndị mbụ, ndị dabba, na ịdị elu ya dị 1442 mita, na Erta Ale, pere mpe, mana ọ ka na -arụ ọrụ.
Agbanyeghị, ihe kacha achọ ịmata n'ọzara a na -adịghị mma bụ na ọ bụ ala nna ya Ndị Afar, otu agbụrụ nke ndị ọzụzụ atụrụ na -awagharị awagharị bụ́ ndị nnukwu mma ha gbara agba na ntutu isi ha yiri mgbaaka. Ha na -ewu ụlọ nwa oge ha ma ọ bụ ari nwere alaka na akwa na -akpụ obodo akpọrọ ịnyịnya ibu.
Ọzara Tenerife, mgbatị nke Sahara
Anyị ahapụla maka njedebe nke ọzara mara mma nke Africa nke, n'eziokwu, bụ mgbatị nke Sahara na mpaghara ndịda ya. Mana anyị na -emeso ya iche maka ọtụtụ ihe pụrụ iche. N'ezie, "teneré" pụtara "ọzara" n'asụsụ Tuareg.
N'ihe dị ka narị puku kilomita anọ, ọ na -esite na ọdịda anyanwụ nke ọdịda anyanwụ Chad n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke Niger. Na, tupu anyị aga n'ihu na -agwa gị gbasara ya, anyị enweghị ike ịjụ ịgwa gị ihe ndị ọzọ gbasara ya. Ọ bụ ebe a na -akpọ oku Osisi Ténéré, nke nwere nkwanye ugwu nke ịbụ onye naanị ya nọ n'ụwa, ebe ọ bụ naanị ya nọ n'ọtụtụ kilomita gburugburu. Na 1973, gwongworo kwaturu ya, na taa, ihe ọkpụkpụ ọla nke na -echeta na ọ nọ n'ọnọdụ ya.
Mana Ténéré so na ọzara mara mma n'Africa maka ebumnuche ndị ọzọ. Iji malite, n'ihi nnukwu ájá ájá ọ na -eme. Ma n'ihi ọtụtụ ihe mgbe ochie nke ihe ochie ka ọ dị. Ikekwe puku afọ iri gara aga ihu igwe ya dị iche n'ihi na mmadụ bi n'ime ya.
N'ezie n'ime Tassili n'Ajjer, ndagwurugwu dị n'ime mpaghara ahụ, bụ otu n'ime usoro nka nka kacha mkpa n'ụwa. Ọ dịghị ihe na -erughi puku iri na ise eserese na ihe osise sitere na oge Neolithic nke na -anọchite anya ndụ na omenala ndị obodo a. Ha na -emetụtakarị omenala kiffian.
N'aka nke ọzọ, na mpaghara kwekọrọ na Niger enwere ọmarịcha ihe ugwu Aïr, otu oke nwere ihu igwe Sahelian nke nwere ọnụ ugwu ndị na -eru mita 1800 n'ịdị elu yana ndị nwere ọdịdị ala dị egwu.
Na, n'etiti ugwu ndị a na ọzara n'onwe ya, obodo nke Agadez, isi obodo nke otu n'ime fiefdoms nke omenala ndị Tuareg. Ị nwere ike ịnwa iche na obere obodo a enweghị ihe ọ ga -enye gị. Ọ dịghị ihe dị anya site n'eziokwu. Ekwuputala ebe akụkọ ihe mere eme ya Ihe Nketa Uwa, ihe nrite nke ọ na -ekerịta n'ọzara Tenerife niile.
N'ezie, n'akụkọ ihe mere eme, ọ bụ ebe njem maka ọtụtụ ụzọ azụmaahịa. Ọbụna taa, ọ bụ ụzọ ọpụpụ nke onye na -eduga Sabha, otu n'ime ụzọ adịghị mma n'ụwa nke ụgbọ njem na -adịghị onye ọ bụla.
Na mmechi, anyị gosiri gị ụfọdụ ọzara mara mma n'Africa. Mana anyị nwere ike ikwu maka ndị ọzọ dị ka Lompoul, na Senegal, ya na ọmarịcha aja aja oroma; nke ahụ Taru, na Kenya, na nso Kilimanjaro, ma ọ bụ nke ogaden, na Etiopia. Agbanyeghị, ọ bụghị ha niile dị ọnụ ala ka anyị leta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Nduzi » Ọzara kachasị mma n'Africa